अधुरै रहयो सुब्बा बन्ने सपना ! – Mission
अधुरै रहयो सुब्बा बन्ने सपना !
आम मानिसमा हुने चाहना जस्तै डिल कुमारी विकको पनि ठूलो सपना थियो,सरकारी जागिरे (सुब्बा) बन्ने । घरपरिवार, छोराछोरीको हेरचाह र आफ्ना पुरा गर्ने जिम्मेवारी थियो, उनीसँग । गृहिणी, आमा र श्रीमतीको जिम्मेवारका बाबजुत उनी पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी थिइन् । उनी आफू बस्दै आएको बैजनाथ १ बाट हरेक दिन बिहान कोहलपुरमा सुब्बाको ट्युसन बढ्थिन् ।
सधै झैँ शुक्रबार विहान पनि श्रीमान देवेन्द्रराज गहतराजले श्रीमतीलाई मोटरसाइकलमा ट्युसन सेन्टरसम्म पु¥याएका थिए । त्यो नै उनीहरुको अन्तिम भेट र विछोड बन्यो । सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने कसम खाएर जिन्दगीको गोरेटोमा यात्रा गरिरहेका देवेन्द्र र डिलकुमारीको यात्रा सदाका लागि अन्त्य भयो । भौतिक रुपमा अब उनीहरु अब कहिल्यै सँगै बोल्न, हिड्न र माया गर्न पाउने छैनन् ।
शुक्रबार अटो दुर्घटनामा दैलेख जिल्ला भगवतिमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कटीकी स्थायी बासिन्दा ३० वर्षीया डिल कुमारी विकको मृत्यु भएको हो । र मृत्युसँगै अन्त्य भयो, उनको सुब्बा बन्ने सपना । देवेन्द्रले पुरा गर्न सकेनन्, सँगै जिउँछु मर्न परे सँगै मर्छु भनेर खाएको कसम । दैवको लिला नै मान्नुपर्छ, उनीहरुको सहयात्रा अकस्मात टुंगिएको बीच बाटो मै ।
कोहलपुर चौराहबाट २ सय मिटर अगाडि कोहलपुर–सुर्खेत जाने रोडमा दुर्घटनामा परेर डिल कुमारीको मृत्यु मात्रै भएन । उनको सुन्दर परिवार उजाडियो । नाबालक छोराछोरी टुहुरा भए । देवेन्द्र आफ्नी जीवन संगिनी गुमाए । दुर्घटनाले गहतराज केसराको परिवारको खुसी उजाडियो । फर्किन नपाउँदै औइलाएको छ, एक सुन्दर सपना ।
उनले श्रीमान देवेन्द्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘ जतिबेला म तिम्रो सामु पुगे । तिमी सायद संसार छोड्ने अन्तिम समय हुँदो । मैले धेरै पटक तिम्रो नाम लिए । सुनेर हो या नसुनेर हो, तिम्रो आँखाबाट बगेको म र छोराछोरी प्रतिको आँसु सम्झनामा सीमित रहयो ।’
स्वर्गीय श्रीमतीप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका शब्द मार्फत उनले कलिला नानीबाबुको आमा र बाबा भनेर बाँकी जिन्दगी कटाउने बताएका छन् । ‘तिम्लाई हिजोका दिनमा मन नपर्ने कुनै कुरा मैले लिएछु भने तिम्रो आत्माले सराप्ने छ । स्वर्गमा बाँस होस बुढी’ उनले लेखेका छन् ।
दैलेख स्थायी घर भएपनि उनीहरु केही वर्षयता बैजनाथमा बस्दै आएका थिए । देवेन्द्रका आफन्त तिलक परियारका अनुसार उनीहरु व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनको पितमारीमा ‘दैलेखी सुनचाँदी पसल’ समेत छ । डिल कुमारी भने राजनीतिमा पनि सक्रिय थिइन् । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) भगवतिमाई गाउँपालिका युवा नेतृ समेत हुन् ।
आफन्त कृष्ण शर्मा उनको मृत्युले सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तन को एक तारा अस्ताएको बताएका छन् । परियार पनि डिलकुमारीलाई बहुप्रतिभाशाली र असल महिलाका रुपमा सम्झिन्छन् । डिल कुमारीका छोराछोरी छन् । दुवै जना डायनामिक स्कूलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । देवेन्द्र भने सुनचाँदी पसल ञ्चालन गर्छन् ।
शुक्रबार आफन्तले दोषि माथि कडा कारबाहीको माग गर्दै कोहलपुरमा चक्काजाम गरेका थिए । पछि दोषिमाथि कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्ने सहमतिपछि चक्काजाम फिर्ता लिइएको थियो । शनिबार भने दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा आफन्तले शव बुझेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले दोषिका नाममा किटानी आइसकेको जानकारी दिएको छ ।
उनको कानुनी प्रक्रिया सबै पुरा भइसकेको छ । सवारी चालक कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का लाल बहादुर कार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा छन् । उनी नै अटो रिक्साका साहु हुन् । दुवै पक्ष बीच क्रिया खर्च साहुले व्यवहोर्ने, क्षतिपूर्ति बापत तीन लाख रुपैयाँ दिने र छोराछोरीहरुको पढाइ खर्च समेत व्यवहोर्ने सहमति भएको छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, चैत्र २२, २०७७ 9:13:12 AM |
Tagged डिलकुमारी विकको मृत्यु
Prevबस दुर्घटनामा दुइको मृत्यु, अठ्ठाइस घाइते (सम्पूर्ण विवरण सहित)
Nextकुमारी बैंकको सरसफाई कार्यक्रम